Dhulgariir xoog leh ayaa daba socda dhulgariirkii dhimashada ee Turkiga
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Turkiga » Dhulgariir xoog leh ayaa daba socda dhulgariirkii dhimashada ee Turkiga
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Wararka Giriigga • News • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Turkiga • Wararka kala duwan
Dhulgariir xoogan oo cabirkiisu gaarayo 5.0 ayaa laga helay meel ka baxsan Xeebta Badda Aegean ee dalka Turkiga. Gariirku wuxuu raacay dhulgariir masiibo ah oo dilay ugu yaraan 27 dhaawacayna in kabadan 800 guud ahaan Turkiga iyo Griiga shalay.
Dhulgariirku wuxuu ka warbixiyay Madaxtooyada Masiibooyinka iyo Maareynta Degdegga ah ee Turkiga (AFAD) goor hore oo maanta ah. Si rasmi ah looma oga in gariirku dalka u gaystay waxyeelo intaa ka badan.
Dhulgariirkii ba'naa, ee lagu qiyaasay 7.0 Sahanka Cilmiga dhulka ee Mareykanka (USGS), ayaa ku dhuftay xeebta Aegean galabnimadii Jimcaha. In ka badan 470 ruxruxitaanno dhulgariir ah, oo ugu yaraan 35 lagu qiyaaso in ka badan 4.0 culeys, ayaa raacay dhulgariirka.
Izmir, waa magaalada seddexaad ee ugu weyn Turkiga, waxaa ku dhuftay dhulgariirka. Dhowr dhisme oo ka kooban dhowr dabaq ayaa loo beddelay burburka, iyada oo tobanaan qof ay ku xaniban yihiin gudaha. Ilaa 100 qof ayaa laga soo badbaadiyay burburka, waxaana wali socda dadaalada samatabixinta sideed goobood.
Ugu yaraan 25 qof ayaa ladilay oo uu kujiro hal shaqsi oo baddu liqday, tirakoobyadii ugu dambeeyay ee ay sameeyeen mas'uuliyiinta Turkiga. Laba qof oo kale ayaa ku dhintay jasiiradda Giriigga ee Samos. In ka badan 800 oo qof ayaa soo gaarey dhaawacyo kala duwan labada dal intii ay musiibadu socotey.
Hogaamiyaasha Turkiga iyo Griiga waxay muujiyeen isku duubnaan dhif ah musiibada ka dib. Raiisel wasaaraha Giriigga Kyriakos Mitsotakis iyo madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa qadka taleefanka kuwada hadlay iyagoo muujiyay tacsi iyo iscaawino midba midka kale.
Shaqada ugu weyn ee tignoolajiyada sanadka soo socda waa kordhinta dakhliga